धनुषामा सीमा स्तम्भ नै गायब
धनुषाको जटही र भारतको पिपरौनवीचको सीमा स्तम्भ गायब भएको छ । जहाँ पिलर थियो, छैन, त्यही ठाउँमा भारतले भन्सार कार्यालय बनाउने तैयारी गरेको छ । यो नेपाली क्षेत्र हो भनेर सुरक्षाकर्मीले भन्दा भारतले ठोक्ने धम्की दिएछ । भारतको यस्तो हवलदारी पारा कहिलेसम्म नेपालले सहिरहने ?
नेपाली नापी टोली गयो, अवलोकन र अनुगमन पनि गरेछ । सीमा स्तम्भ हराएको पक्का गर्‍यो तर भारतले दजगजामै बनाउन लागेको भन्सारलाई रोक्न सकेन, भारतले निर्माणकार्य अघि बढाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नापी नक्सा देखाउँदा दुबै पक्षले मिलेर विवाद समाधान गर्ने भनेका छन् तर भारतले निर्माणकार्यलाई रोक्ने सुरसार देखाएको छैन । यो क्षेत्र अहिले तनावग्रस्त छ ।
आखिर भारतले पटक पटक र हरेक सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण किन गर्छ ? नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीको पटक पटक आवतजावत र भेटवार्ता भएको छ, केही समयपछि फेरि भेट हुनेवाला छ । सीमामा तनाव भइरहने, भारतले बखेडा झिकिरहने र प्रधानमन्त्री स्तरमा सम्बन्ध सुधार भयो भनेर नाक फुलाउने ?
दुई देशको सम्बन्ध सुधार हुन जनस्तरमा विश्वास हुनुपर्छ । भारत नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर खाइरहने, नेपालले सहिरहेर पनि सम्बन्ध सुधार हुन्छ र ?
सम्बन्ध सुधार हुनका लागि खुला सीमामा समस्या हुनुहुन्न । भारतका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्छन् भने प्रधानमन्त्री स्तरमा सम्बन्ध सुधार भयो भन्नुले मात्र सम्बन्ध सुमधुर हुनसक्दैन ।
एक हजार त्रिसठ्ठी स्क्वायर मिटर नेपाली भूमि भारतले खाइसक्यो । यस सम्बन्धमा नेपाली जनमानसमा भारत बिस्तारवादी नै हो, नेपाललाई दु:ख दिएर सुखानुभूति गर्छ भन्ने नेपालीको मनमा छ । जबसम्म नेपालीको सद्भाव आर्जन गर्न भारत तैयार हुँदैन, नेपालीको मनमा भएको घृणाभाव हटाउने तर्फ भारतका शासनाधिकारीको ध्यान जाँदैन, तवसम्म नेपाल भारत सम्बन्ध जतिसुकै पुरातन भए पनि सुमधूर छ भनेर मान्न सकिन्न । बेटी र रोटीको सम्बन्ध होला तर नेपाल स्वाधीन मुलुक हो, स्वाधीन मुलुकमाथिको कुनै खालको हस्तक्षेपलाई नेपाली राष्ट्रवादी जनताका लागि सह्य हुनसक्दैन । बलजफ्ती नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोप्रति नेपाली मनमा भारतीय शासककाप्रति घृणाभाव नै छ ।